Paikady tarihin'ny data-mamorona doka ara-tsosialy Jedi-ambaratonga | Martech Zone
Paikady tarihin'ny data dia mamorona doka ara-tsosialy Jedi-level
Zoma, Aprily 17, 2020 Zoma, Aprily 17, 2020 Michael Ray
Star Wars mamaritra ny Force toy ny zavatra mikoriana amin'ny zavatra rehetra. Darth Vader dia miteny amintsika mba tsy hamaivanantsika azy io ary Obi-Wan dia nilaza tamin'i Luke fa mampifamatotra ny zava-drehetra izy io.
Raha mijery ny tontolon'ny dokambarotra media sosialy dia tahirin-kevitra izay mampifamatotra ny zava-drehetra, mitaona ny famoronana, ny mpihaino, ny fandefasana hafatra, ny fotoana ary maro hafa. Ireto misy lesona vitsivitsy hanampy anao hahay hampiasa an'io hery io hanangana fampielezan-kevitra matanjaka kokoa.
Lesona 1: Mifantoha amin'ny tanjona kendrena
Ny fifantohanao dia mamaritra ny zava-misy.
Ny fifantohana dia singa tokana manan-danja indrindra amin'ny fampielezan-kevitra mahomby ary ny tsy fisian'ny fifantohana no tena mahatonga ny tsy fahombiazana. Ny tanjona mazava sy azo refesina dia zava-dehibe ary izy ireo dia farito ny zava-misy.
Rehefa misafidy tanjona kendrena ianao dia ampiasao ny angona angon-drakitra ao amin'ny tranokalanao sy ny fantsona sosialy hahitana raha azo tanterahina izany.
Mifantoha amin'ny tanjonao: Mahazoa adiresy mailaka 1,000 prospect.
Avereno jerena ny angon-tranonkala: Miorina amin'ny angon-drakitra taloha, hitantsika fa mila olona 25 mitsidika an'ity taratasy ity mba hahazoana adiresy mailaka iray.
Fantaro ny tanjon'ny fifamoivoizana amin'ny tranonkala: Raha olona 25 = adiresy imailaka 1, dia hahatratra 25,000 ny hits amin'ity pejy web ity hahazoana adiresy mailaka 1,000
Mihazakazaha scenario ara-tsosialy: Ny ankamaroan'ny sehatra doka ara-tsosialy dia manana fitaovana fampisehoana izay mampiseho fahatsapana, tsindry na fiovam-po. Ampidiro ao anatin'ireto fitaovana ireto ny teti-bolanao hijerena raha azo tratrarina ny tratry ny tampoka tranonkala 25,000.
Tombano ary ampifanaraho: Raha mifanaraka amin'ny teti-bolanao ny tanjonao dia tsara! Raha eo ambany io dia mametraha tanjona azo tratrarina kokoa na ampitomboy ny tetibolan'ny fampielezan-kevitra.
Lesona 2: Fidio tsara ny lalanao
Ny tahotra ny fahaverezana no lalana mankany amin'ny lafiny maizina.
Betsaka ny mpivarotra no manapa-kevitra mifototra amin'ny hevitra fa raha tsy mandefa ny doka amin'ny mpihaino betsaka araka izay azo atao izy ireo dia ho resin'ny fifaninanana. Raha ny tena izy, mahita ny marina Ny mpijery dia toy ny mahita fanjaitra ao anaty vala galactic ary ny angona dia hanampy anao hahatratra azy ireo amin'ny fomba mahomby sy lafo kokoa.
Ankehitriny dia matetika ianao no manana ny hevitry ny mpijery tianao hanaovana dokam-barotra, fa mila mamaritra ny fotoana sy ny toerana mety ahatongavana amin'izy ireo ianao. Ity ny fomba famelana ny data hanapa-kevitra:
Milalaova amin'ny tanjaky ny tamba-jotra: Ny tambajotra sosialy tsirairay avy dia manana tanjaka manokana mamela anao hahatratra ny mpihaino amin'ny fomba samihafa. Ny LinkedIn, ohatra, dia tsara ho an'ny kendrena lohateny asa, ka raha ny mpihaino anao dia injeniera, afaka manangana mpihaino LinkedIn mora foana ianao hanatratra azy ireo. Na izany aza, raha mifantoka amin'ny teknolojia injeniera manokana ny fampielezankevitrao (lazao fa dia haingam-pandeha haingam-pandeha) dia azonao atao ny manampy dokambarotra Twitter izay mamela anao hikendry mifototra amin'ny resaka ataon'ny olona manodidina an'io haitao io satria efa tafiditra amin'ity lohahevitra ity izy ireo .
Amin'ny doka ara-tsosialy, habe no resaka: In Mitokona ny fanjakana Niverina i Yoda ary nilaza tamim-pitiavana an'i Luke fa “tsy maninona ny habe”Fa amin'ny doka, ny habe no zava-drehetra. Amin'ny ankapobeny, ny dobo mpijery betsaka dia mamela ny tambajotra doka ara-tsosialy hitsimpona amin'ny alàlan'ny algorithm data-ny azy manokana amin'ny fomba mahomby kokoa hanampiana hamantatra ireo olona mety hamaly ny doka nataonao. Ny mpihaino kely kokoa dia tsy manome data firy ho an'ireo algorithma ireo, saingy mahomby kokoa izy ireo ary afaka manampy anao hanao zavatra toy ny fikendrena orinasa na indostrialy tsirairay. Samy hafa ny fampielezan-kevitra rehetra, ka samy hafa na kely na kely ny harato arosonao.
Ataovy mifaninana ny mpihaino: Manana safidy fitadiavana sosialy marobe ianao izay misy ny lisitry ny mpanjifa efa misy, ny mpihaino ary ny demografika / tombontsoa. Raha tokony hiantehitra amin'ny sambo tokana ianao hitantana ny sakana amin'ny marketing, mihazakazaka mifanatrika sy mihaona ny mpanatrika ary azonao atao ny mamantatra hoe iza no tena mandaitra ary avy eo miovaova arakaraka ny zava-bita.
Lesona 3: Miantehitra amin'ny angona fa tsy vintana
Raha ny zavatra niainako dia tsy misy izany atao hoe vintana izany.
Miseho ny Jedi tsara vintana noho ny fiofanan'izy ireo mafy sy ny fanoloran-tenany hianatra ny fomba hamantarana izay hetsika tokony hataony sy ny fomba anarahan'izy ireo ny Force mitarika ny lalany. Ho an'ny mpivarotra media sosialy, ny angon-drakitra dia mitana andraikitra mitovy amin'ny dingana rehetra amin'ny dian'ny dokambarotra galactic, ahafahanay mandray fanapahan-kevitra avara-pianarana mifototra amin'ny zava-misy fa tsy vintana.
Ankehitriny, ampahany lehibe amin'ny fampielezan-kevitra ny famaritana hoe inona avy ireo singa mamorona sary sy fandefasana hafatra hampiroborobo azy. Matetika, izany dia mitarika amin'ny tsy fitovian-kevitry ny mpiasa, saingy maharesy azy ireo ny angona. Ity no fomba:
Mametraha tsipika fanombohana: Ny singa famoronana rehetra dia tokony hifanaraka amin'ny fenitry ny marika, hifandraisany amin'ny atiny avoaka ary ampifanarahana amin'ny mpanatrika kendrena. Tombano ny zavatra niasa taloha mba hamaritana izay mety amin'ny manaraka.
Fitsapana ny zava-drehetra: Matetika loatra ireo marika no manandrana manaparitaka ny fampielezan-kevitr'izy ireo amin'ny sary sy hafatra tokana. Ny atahorana dia raha mandeha izy dia tsy fantatrao ny antony sy raha tsy mahomby dia tsy fantatrao izay homena tsiny. Fa andramo ny sary / video fototra efatra farafahakeliny, dika mitovy amin'ny dika mitovy doka efatra, lohateny telo ary antso-to-hetsika roa (CTA). Eny, maharitra ela kokoa ny fametrahana azy, fa manome angona tsy voavidy izay singa miasa sy ny antony.
Manatsara ny zava-drehetra: Elaela ny andro fampielezan-kevitra doka-sy-hanadino-azy. Rehefa manomboka ianao dia tokony handinika ny metrika fampisehoana isan'andro isan'andro amin'ny herinandro voalohany ary farafahakeliny indroa isan-kerinandro aorian'izay.
Esory ny sary, hafatra na lohateny lehibe tsy mahomby.
Amboary ny teti-bola mankany amin'ny sary, hafatra na lohateny izay mahomby loatra.
Raha tsy mandeha tsotra izao ny fampielezan-kevitra, vonoy, araho ny angona ary andramo manamboatra azy fa aza avela handeha ny tetibola.
Raha mitondra potsitra be ianao nefa tsy misy miova ao amin'ny tranonkalanao dia tombano ny pejy fananganana — tonga tokoa ve ny angovo sy ny hafatry ny doka? Lava loatra ve ny endrikao? Manaova fanovana. Fanandramana. Avereno ny fampielezan-kevitrao ary jereo raha mivaha ny olana.
Mpihaino tery: Ho an'ny ankamaroan'ny fampielezan-kevitra, ny mpihaino kendrenao dia milevina ao anaty vondrona mpihaino marobe (ny fanjaitrao ao anaty vala galactic) ary anjaranao ny mitaona ny olona hivoaka. Fomba iray lehibe anaovana izany ny fanadiovana ny mpihaino anao miorina amin'ny fampisehoana.
Raha misy firenena na fanjakana sasany tsy mandray, esory ao amin'ny faritry ny mpihaino anao izany.
Raha misy demografika sasany mamaly amin'ny taha avo roa heny noho ny olon-kafa rehetra, aforeto ny teti-bola hanohanana azy ireo.
Mampiasà mpijery fifamofoana ary manamboara fijery ivelany. Ohatra, raha manao fampielezan-kevitra amin'ny Facebook ianao amin'ny alàlan'ny famerenanana tranonkala, mamorona mpihaino fandraisana anjara maneho ny olona mavitrika indrindra. Ampiasao avy eo ity mpihaino ity mba hananganana mpijery toa azy ary hanatsara kokoa ny valiny.
Ao amin'ny toerana maizimaizina no ahitantsika ny tenantsika, ary misy fahalalana kely kokoa manazava ny lalantsika.
Zava-dehibe ny fahalalana ary ho an'ny haino aman-jery sosialy Jedi, ny angona no loharanon'ny fahalalana marina. Tsarovy fa arakaraka ny habetsaky ny angona azonao arakaraka ny fametrahana ny fampielezanao haino aman-jery sosialy no hahitana vokatra tsara kokoa sy vinavina kokoa.
Ary enga anie ny hery homba anao hatrany.
Tags: Obi wan kenobimanatsaraadin-kintana
Michael dia talen'ny media sosialy ao Doka STIR & Marketing iraisana. Ny asa haino aman-jery sosialy dia mihoatra ny asa ho azy, filan-dratsy izay namela an'i Michael hanambatra ny fahaizany mamorona, ny sainy mpandinika, ary ny fitiavany ny serivisy ho an'ny mpanjifa ho amin'ny kariera izay sarotra foana ary tsy mankaleo velively.